Dowlada Sweden oo loogu baaqay in ay ka hortagto xiritaanka xawaaladaha Soomaalida | Somaliska
Bilihii la soo dhaafay waxaa soo if baxay in Bankiyada qaarkood ay koontooyinka ka xireen qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida, iyagoo sabab uga dhigay in aysan xaqiijin karin cida qaadatay lacagaha ay diraan dadka Soomaalida. Isla markaana cabsi ka qaba in lacagtaas ay gacanta u gasho argagixisada. Bankiyada xawaaladaha ka xiray koontooyinka waxaa ka mid ah Swedbank oo xitaa diiday in ay diraan lacagaha deeqda ah ee Sweden ay siiso jaaliyadaha iyo ururada Soomaalida. Arintaan ayaa cabsi weyn ku abuurtay Soomaalida ku nool Sweden iyo xawaaladaha in dhamaan bankiyada ay koontooyinka ka xiraan xawaaladaha, oo ay istaagto lacagta biilasha ee loo diro Somalia.
Wargeyska Aftonbladet ayaa maanta waxaa lagu qoray baaq ku wajahan dowlada Sweden, kaasoo ay soo qoreen xubno isugu jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Sweden oo kala ah Amir Adan iyo Arhe Hamednaca iyo Mussie Ephrem oo ka tirsan Hay’ada Forum Syd iyo Erik Wahlberg oo ah qareen ku taqaqusay arimaha dhaqaalaha. Waxay ka warbixiyeen muhiimada ay leedahay lacagaha loo diro Somalia, iyagoo ka dhawaajiyay in Soomaalida ku nool Sweden ay sanadkasta Somalia u diraan 500 milyan oo karoon oo haddii la joojiyo saamayn weyn ku yeelanaysa boqolaal kun oo qof oo Soomaali ah. Waxay sidoo kale xaqiijiyeen in shirkadaha xawaaladaha Somalida ee ka hawl gala Sweden ay dhamaantood haystaan ogolaasho ay bixisay Hay’ada la socodka lacagaha (Finansinspektionen) isla markaana ay si sharci ah u shaqeeyaan.
Waxay ugu baaqeen dowlada Sweden in ay soo fara galiso arintaan, oo ay wadahadal la furto bankiyada, iyo xawaaladaha si loo helo xal joogto ah oo looga fogaado in ay istaagto lacagaha loo diro Somalia. Waxay Sidoo kale ugu baaqeen dowlada in ay la shaqayso dowladaha kale iyo hay’adaha caalamiga ah sida EU-da iyo Bankiga Aduunka si xitaa loo xaliyo dhibaatooyinka midaan la midka ah ee ka jira wadamada kale.
Jimcaale habaarka kadaa Somalida dhibkeedii kale ayaaka batey adiga lacagta latirayaa ma dhibbeykugu heysaa waxaas oo kale hasheegin waa been adiga ayaa raba inlaxidho waa xaasidnimo weyn taasu sheex
WAANKA NAXAY WAXAA AADSHEEGEYSI WAAYI HOOYO IYO CARUURTEYDII AYAA JOOGA SOMALIYA NAXDINTAYADA AYAA KUDILA JIMCAALE
walalkeen jimcale waxan ku leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka hakuugu daro hawsha badan ee aad umadaada u hayso, waanan ka xumahay hadalada aan loo meel dayin ee ay dadka qaar iskaga hadaaqayaan ma fahmi karno in ay faham la aan ka tahay oo aanay fahmin mawdhuuca iyo in ay xumaan ku jirta tahay iyo in ay aanay saaxi ahayn marka ay wax qorayaan.